Omunye wabaholi abakhona phakathi kwamazwe, okuyinto zitholakala eningizimu-mpumalanga Asia Thailand. Amakhulu omangalisayo zezindela Buddhist kanye amathempeli, izigodlo omkhulu, sandy Samui amabhishi Phuketta, Pattaya nightlife ne imibukiso ongenakulibaleka zokuzijabulisa, ubulili ezokuvakasha owaziwa, massage abadumile Thai, indlovu ugibele, izimo olumangalisayo diving, ize izimakethe efanayo elintantayo exotic iziqhingi lingenamuntu, cuisine okungavamile futhi ongasoze Buddhist imikhosi - ke edonsela lenqwaba izivakashi.
Zonke ezikhangayo Thailand kunzima kubala. "Idolobha iplamu zasendle" Bangkok yasungulwa ngekhulu le-18 iNkosi Rama I. is for emangalisayo izikhumbuzo kwamasiko bokwakha ezaziwayo. Vele 30 ukusuka Bangkok, itholakala ingwenya ipulazi Kunawo Wonke Emhlabeni, lapho kukhona angaphezu kuka-40 eziyinkulungwane izingwenya, kanye eduze Zoo kanye Museum Dinosaur.
Izikhangibavakashi Thailand engavamile futhi original. On emakethe entantayo Bang Nam Luengo ungathenga ezihlukahlukene izimpahla, kuhlanganise izithelo, izimbali, yezandla, izinongo, ukudla kwasolwandle. Nokho, imininingwane ezithakazelisayo kakhulu impahla abahwebi emakethe ngubani deftly ukusebenzisa phakathi imigqa ezikebheni zabo. Eduze nedolobha Nakhon Pathom kuyinto enkulu elikhazimulayo imitha-127-okusezingeni eliphezulu Buddha esifanekisweni, okuyinto enkulu kunazo zonke emhlabeni. Eduze nedolobha Kanchanaburi kuyinto ibhuloho loMfula Kwai okubizwa ngokuthi "umgwaqo sokufa", okwakhiwa kuso iziboshwa zempi ngesikhathi seMpi yoMhlaba yesiBili. Budebuduze ukusakaza "Rose Garden" - isikhungo adumile namasiko kanye best embukisweni ethnographic yezwe. Lapho, entshonalanga Bangkok, kuyinto zoo futhi indlovu engcwele.
Ezinye ezikhangayo zitholakala eThailand enyakatho. Nakuba kule ndawo ongakabi yingcweti ikakhulukazi yizivakashi, lapha umsuka impucuko Thai. Kulesi sifunda kwamahlathi, izimpophoma, amaholide kazwelonke ezimibalabala, amakhulu amathempeli lasendulo namadolobha.
Idolobha lesibili ngobukhulu futhi ebaluleke kakhulu Thailand Chiang Mai. A amakhilomitha ambalwa ukuba bafike owelula edolobheni eliyimfihlakalo Mehongsom. A 5 amakhilomitha kuya eningizimu itholakala komnikazi bokuqala endaweni, eyaqala 10-11 leminyaka.
Thailand Izikhangibavakashi hit ngempela exoticism yayo. Chiang Mai kanye nezindawo ezizungezile kuhlala kubantu nezinhlanga phezu isiko ehlukile ukuthi impucuko ngeke ibe nanoma imuphi umthelela ngokuphelele kwaze kwaba sekhulwini lama-20. Sezizwe zakwa ongaqondakali kunayo kule ndawo ibizwa ngokuthi UKaren. Ziyakwazi irhuluphelo zesifazane ubuhle intombazane ngezindlebe lenkhulu kanye nentamo ende, ngakho amantombazane kusukela zisencane ukugqoka evuthayo zethusi tube futhi lapho zivuleka le ke entanyeni. Kancane kancane ngeminyaka izindandatho kunezelwa, nobude entanyeni luyanda. Kutinhlanga abaningi zanikeza imvume yokuba nabo babengicindezela ukuba ngibheme iziphathimandla opium, njengoba kubhekwa esiyingxenye yesiko kwamasiko. On ezivakashela kulezi zizwe, isinqumo asisebenzi.
Thailand ezikhangayo izivakashi, njengoba nje kuvamile namanje yehlukene kaningi okubalwa futhi engavamile. Futhi izivakashi intshisekelo edumile karate - Muay Thai Chaiya, Muay Thai, Krabi, Thailand krabong. Izakhamuzi Akwaziwa passion kuleli zwe ukuze ezemidlalo ukugembula okwakuhilela izilwane. Lokhu cockfights, imincintiswano nokulwa inhlanzi, ngisho nezindlovu elwa.
Beautiful, enhle, ezingavamile, futhi umane ongenakulibaleka lizwe Thailand. Ukuvakasha lapha muhle kabi athuthukile futhi kuletha imali enhle, ngoba kulelizwe kuwufanele ngempela ukuvakashela futhi uthole eningi okuvelayo acacile kakhulu.
EPrague iminyuziyamu uhlu, incazelo, amaqiniso athakazelisayo kanye nokubuyekeza
Kuyini multivisa Schengen? Ingatholakala kanjani multi-entry Schengen ngokwakho
Norway Amaqiniso ethakazelisayo emlandweni yesimanjemanje
Indlela efanele oda Taxi service.
CRJ-200 - izindiza ezithwala izindiza
Submucosal lesizalo fibroids
Lapho uhlala imvelo iDemo-tailed albatross? Incazelo nesithombe lwenyoni
Honda NC700X: Ukucaciswa kanye nokubuyekeza
Owesifazane Capricorn: isici uphawu
Severomuisk ukwakhiwa Umhubhe umlando, incazelo, isithombe
Pancake okumnandi nge strawberry
Beta-lactam imithi elwa namagciwane: mshini wezenzo kanye ngezigaba
"IZH Planeta-5": ezibekiweko lobuchwepheshe. New "IZH Planeta-5"
Mental ukugula futhi yabo izici
Sole TEP umba noma cha? TEP Sole - kuyini? Funda kulokho kwenza izicathulo amathe
Dmitry Azarov: Biography, amaqiniso ezithakazelisayo, izithombe